နွေရာသီ Tags: Insert | | Tinker အခမ်းအနားကျင်းပ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
နွေရာသီနေ့က Plug အဆိုပါ Sommertagszug များအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပါ! အဆိုပါ Sommertagszug ပြန် Palatinate မှစတငျရနှင့်အခြားအိမ်နီးချင်းဒေသများပါဝင်သည်တဲ့ထုံးစံပါပဲ။ ဆောင်းတွင်းအထဲကဒီအရောင်စုံရွှင်လန်းသောချီတက်ပွဲ, အစောပိုင်းကသူလည်း Todaustragens ၏အစဉ်အလာရှိခဲ့ပါတယ်။
နွေရာသီ Tags: Plug ၏အစဉ်အလာ
နွေရာသီနေ့က Plug သစ်ကိုအသက်, နွေဦးနဲ့ဒီမီးရထားအတွက်အသစ်တခုသံသရာ၏အရှင်အစအဦးသင်္ကေတ။ Sommertagszug ၏မြို့တော်စည်ပင်ကပေါ် မူတည်. အီစတာမတိုင်မီအစဉ်အလာတတိယမြောက်တနင်္ဂနွေပဲအီစတာမတိုင်မီရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို plugging Tinker နွေရာသီနေ့က
အဆိုပါလူကြိုက်များထုံးစံKurpfälzerလမ်းအလွန်ဖြစ်ကောင်းအယူမှားအမြစ်များရှိပြီးသင် Sun ကဘုရင်လူးဝစ် XIV ၏ထိုအချိန်ကသူ့ကိုအထောက်အထားရှာပါ။ ဒါဟာသို့သော်ထားပြီးရောင်စုံနွေရာသီတစ်ရက်ပြီးတော့ထည့်ပေးခဲ့တယ်ဖွစျစေ, မသိရသည်။ Sommertagszug ပြီးနောက်ဆောင်းတွင်းကြီးမားတဲ့မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောအတွက်ဧရာ snowman ၏ပုံစံကိုမီးရှို့သည်။
နွေရာသီနေ့က Plug ကဘာလဲ?
တစ်ဦးကနွေရာသီနေ့က Plug ဤနေရာတွင်ရောင်စုံဖဲကြိုးတပ်ဆင်ထားသော Insert, အဖြစ်ရည်ညွှန်းရိုးရှင်းတဲ့ဘားဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦး Hefebrezel ၏ထိပ်တွင်တခါတရံတောင်လွထွက်ကြက်ဥအသစ်သောအသက်နှင့်နွေဦး၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ထိုင် - ဤနေရာတွင်သင်ကလည်းအီစတာဖို့ရည်ညွှန်းတွေ့နိုင်ပါသည်!
အချို့သောမြို့ကြီးများ, ပန်းသီးသို့မဟုတ်နွေရာသီနေ့က Plug အစဉ်အလာအပေါ်ပန်းသေးငယ်တဲ့ပန်းစည်း၌တည်၏။ မိမိလက်၌အရောင်စုံနွေရာသီနေ့ကတုတ်နှင့်အတူအမြိုးသားအမြိုးမြိုးသောအသင်းအဖွဲ့များ၏ float အတူလိုက်ပါ။ မှာအားလုံးသင်တန်း၏သူငယ်များအဘို့အတွက်မီးမောင်းထိုးပြ, - သင်တန်း၏ချိုမြိန် pretzel မဖြစ်မနေရဲ့အဆုံးမှာစားရ!
ယခုမှာဤအရပ်၌သူ့ဟာသူ plugging ထိုကဲ့သို့သောရောင်စုံနွေရာသီနေ့ကမှလက်မှုပညာကိုမည်သို့အပေါ်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်လာသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်အခါမြက်ခင်းပေါ်နှင်းကျနေဆဲပျော့မည်မဟုတ်နှင့်လေးတွေပြီးသားနွေဦးအရောင်များ၏အိပ်မက်နေသောစိတ်ဓါတ်များခြားနားနေသည်။
ပထမဦးစွာသင်အောက်ပါအမှုအရာလိုအပ်တယ်: တစ်ဦး hazelnuts သို့မဟုတ်ဝါးတုတ် (ထိုအပွင့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်လည်းဖြစ်ကြသည်), တစ်အိတ်ကပ်ဓါးတစ်မှုတ်ထုတ်ကြက်ဥ, တစ်ဦး Hefebrezel (ထွက်ရှိသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုတ်ရ!), ကြိတ်သို့မဟုတ် crepe စက္ကူ။
ဝန်ထမ်းများတစ်ခုခုအမြိုးသားတို့အဘို့အသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာအကြံပေးချက်များ, သင်ပြီးဆုံးတပ်ဆင်ခံရဖို့ (ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ယခင်ကလည်း Self-Tinker ဖြစ်စေ) ကြိတ်နှင့်အတူအောက်ခြေအထိထံမှ Plug ကိုစတင်ပါ။ crepe စက္ကူသုံးစွဲဖို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်အဘယ်သူသည်ရှည်လျားရောင်စုံဖဲကြိုးနှင့်အတူနွေရာသီနေ့က Plug ဆင်ယင်ခြယ်သနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်သေးငယ်တဲ့သားသမီးတို့အဘို့, ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ရိုးရှင်းစွာအထိပ်ကိုကျော်အများအပြားရှည်လျား crepe စက္ကူတိပ်ခွေထားနည်းနည်းဆွဲချကြောင်းပေါ် Hefebrezel နှင့်ကြက်ဥကိုတက်ထား - သောနွေရာသီနေ့ကမိတ်လိုက်သည်။
နေဆဲ crepe စက္ကူနှင့်အတူခြုံနှင့်လှံတံကိုသူ့ဟာသူနိုင်ပါတယ်ဆန္ဒရှိသူများသည်, ဒီမှာကောင်းကင်ပြာကန့်သတ်ပါ!
နစ်ကိုးလပ်စ | ဆင်နွှဲ
စိန့်မာတင် - စိန့်မာတင် | ဆင်နွှဲ
ကလေးတွေနဲ့အတူ Tinkering - DIY
ကလေးတွေနဲ့အတူ Tinker - DIY